सांसद र प्रदेश प्रमुखलाई सम्झने राजपा नेपालले किन सम्झेन सहिदलाई ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » सांसद र प्रदेश प्रमुखलाई सम्झने राजपा नेपालले किन सम्झेन सहिदलाई ?
सांसद र प्रदेश प्रमुखलाई सम्झने राजपा नेपालले किन सम्झेन सहिदलाई ?
काठमाडाै माघ ६ गते । माघ ५ गते राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको कार्यालयमा प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेश प्रमुखको सम्मानका लागि विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
त्यो कार्यक्रममा पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो, अनिल कुमार झाको पनि उपस्थिति थियो । संयोग भन्नौ या योजनावद्ध । माघ ५ गते मधेश वलिदानी दिवस थियो तर राजपा नेपालले बलिदानी दिवस मनाउन उचित ठानेनन् ।
त्यही सहिदको बलिदानीका कारण प्रदेश सभा सदस्य भएकाहरु लाई सम्मानका लागि शुभकामना तथा बधाईको कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो तर सहिदलाई सम्झन एउटा फोटो पनि राखिएको थिएन ।
एक महाचिवले भन्नुभयो, सहिदलाई त सम्झेको हो तर मौन धारण गरेर ।
यो मौनधारण पार्टीको हरेक बैठकमा हुनु गर्छ अर्थात नियमति प्रकृया जस्तै भएको थियो । समानुपातिक सदस्यलाई सम्बोधन गर्दा पनि नेताहरुले मधेशका सहिदलाई सम्झेनन् । यस्तो लाग्यो कि माघ ५ गते बालिदानी दिवस हो जस्तो उहाँहरुलाई लागेको थिएन ।
बरु अर्को दिन कुनै कार्यक्रम गर्दा सहिदको फोटोमा मल्यार्पण गरेर कार्यक्रम गर्ने गर्दथ्यो तर हिजो विशेष दिन भएपनि उहाँहरुले सहिदलाई सम्झन उचित ठानेनन् ।
प्रदेश सदस्यलाई सम्मान गरिसकेपछि पार्टीले त्यही दिन राजपा नेपालका महासचिव उमाकान्त झाको सम्मान पनि छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । प्रदेश पाँचका प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएका उमाकान्त झाका लागि कार्यक्रम गर्ने नेताहरुले सहिदहरुलाई सम्झनु भएन ।
पार्टीले बलिदानी दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम गरेर त्यसैमा संसद र प्रदेश प्रमुखलाई सम्मान तथा बधाई दिँदा हुन्थ्यो तर उल्टै गर्यो । संसद र प्रदेश प्रमुखको लागि गरिएको कार्यक्रममा सहिदलाई श्रद्धाञ्जली दिन एकमिनेट मौन धारण गर्यो ।
संसद तथा प्रदेश प्रमुखका लागि कार्यालयमा दुईपटक कार्यक्रम गरेका राजपा नेपालले बलिदान दिवसलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्ले हिजो मैतीघर मण्डलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने व्यक्तित्वहरुले पनि यस कुरालाई उठाउनु भएको थियो ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक सिके लालले बालिदानी दिवसलाई मधेशवादी दलले महत्व नदिनु भनेको दुखद कुरा रहेको टिप्पणी गर्नुएको थियो ।
वितेका वर्षहरुमा सो पार्टी निकट युवा तथा विद्यार्थीहरुले पनि कार्यक्रमहरु गर्नुहुन्थ्यो । रक्तदान कार्यक्रमहरुको साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि उहाँहरुले गर्नुहुन्थ्यो तर यसपटक उहाँहरुको तर्फबाट पनि केही भएन ।
राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य बीपी यादवले एक समय थियो कि रमेश महतोको सम्मानका लागी को पहिले कुन पार्टिको नेता पहिले फुल माला लगाउने हानाथाप नै हुन्थ्यो तर पार्टीहरुले कार्यक्रमको महत्व नदिएको दुखेसो पोख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, राजपा नेपालको लहानको कार्यक्रम र जनकपुरको दुई दिने बैठक संगसंगै थियो । एका एक दुबै कार्यक्रम के कारण ले स्थगित भयो ? बिगत वर्षहरूमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सबै कार्य स्थगित गरेर शहिद दिवस को कार्यक्रम बिशेष तयारीका साथ गर्नु हुन्थ्यो तर यस पालि त्यो भएन ।
राजपा नेपालले लहानमा विलदानी दिवस भव्य रुपमा मनाउने तयारी गरेको थियो । सबै नेता त्यहाँ जाने प्रचार प्रसार पनि गरेको थियो । नेताहरु जाने मनस्थितिमा पनि हुुनुहुन्थ्यो तर अन्त्यमा नेताहरु त्यहाँ जानु भएन ।
राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव सिरहामा भएका कारणले त्यहाँ जानु भयो । उहाँसँग हिजो सम्पर्क गर्दा राजपा नेपालका अन्य नेताहरु
आउने कार्यक्रम रहेको छ हेरौ कार्यक्रम शुरु हुँदासम्म को को आउनु हुन्छ भनि भन्नुभएको थियो । अन्ततः कोही पनि जानु भएन ।
राजपा नेपालका सबै नेताहरु आउनु हुन्छ भनि प्रचार गरेको कारण कार्यकर्ताको उपस्थिति बाक्लै थियो । तर त्यहाँ राजकिशोर यादव बाहेक अरु कोही नगएपछि जनताहरु निराश भएको थियो ।
बीप यादव भन्छन्, राजपाले सामानुपातिकमा निर्वाचित भएका प्रदेश सभाको सदस्यहरुलाई समान गरियो । मधेस आन्दोलन को उपलब्धि को बलमा नेपालमा संघियता स्थापित भएको छ । गाँउपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाको बार्डमा सदस्य, अध्यक्षको प्रतिनीधित्व समावेशीको आधारमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिलाको प्रतिनीधित्व जो भएको छ यो सब मधेस आन्दोलनको उपज हो ।
उहाँले भन्नुभयो, पैसा वालाले अवसर पाउँछ, नातावाद, कृपावाद र परिवारवाद हावी छ । आज पनि मधेसमा शहिद परिवार आन्दोलनमा घाईते भएका र संघर्ष गरेका ब्यक्ति अवसरबाट बञ्चित छन् । मधेसका चिया पसल र बिभिन्न चोकमा आम जनताले चर्चाको बिषय बनाएको छ ।